Ogaden News Agency (ONA) – Qubanaha Wararka Soomaalida Ogadenya.
Qubanaha Wararka Soomaalida Ogadenya.
Wararka nagasoo gaadhaya wadanka Ogadeniya gaar ahaan Xarunta Dhexe ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenya (JWXO) ayaa waxay sheegaysaa dil iyo gibir hor leh oo lagu soo rogay dhamaan wadanka Ogadeniya oo idil.
Warku waxa uu sheegayaa in markii ay taariikhdu ahayd 26/ 2 / 2018 deegaanka lagu magacaabo baali dagaal ku dhexmaray shacabka Soomaalida iyo Oromada in muwaadin Soomaali ah lagu dilay dagaalkaas.
Warkan ayaa intaas raacinaya in dhamaan Ogadenya oo idil lagu soo guray gibir cusub waxaana tuulooyinka lagu xukumayinay bixiyaan aduun lacageed oo gaadhaysa 1,000,000, milyan oo bir meesha Gobollada lagu amray inay bixiyaan 3,000,000 oo birr ka Itoobiya ah.
Dhinaca kale waxaa lasoo sheegayaa in roobab aan badnayn ay ka curteen deegaamo kala duwan oo kamid ah Ogadenya sida Jarar iyo Nogob. Meelaha roobka laga soo sheegayo ee Gobolka Jarar ayaa waxaa kamid ah deegaamada kala ah bukudhawo, dusmo, coll kudhalay, dhaliile, sibi badhkeed, iyo birqod. Sidoo kale ayuu roobku ka curtay deegaamo kamid ah Gobolka Nogob kuwaas oo kala ah Fiiq, Xamaro, Baali badhkeed.